Nezvedu - Higee Machinery (Shanghai) Co., Ltd.
HIGEE MACHINERY ane anopfuura makore gumi nemashanu ehunyanzvi ruzivo.
HIGEE MACHINERY inobata mukugadzirwa uye kugadzirwa kweKuzadza Kucheka uye Kunyora michina mitsara munzvimbo dzakasiyana siyana kunyanya mumvura, zvinwiwa uye zvinwiwa maindasitiri. Ehe zvakare ipa michina yechikafu, chemishonga, cosmetics uye chemakemikari maindasitiri.
Michina yedu yatumirwa kunze kwenyika dzinopfuura zana pasi rese. Isu tine mukana wekuita mhinduro yakanakisa yekusangana nezvinodiwa nevatengi uye kutarisisa mune yakanaka mhando uye sevhisi yekuvaka nekuchengetedza hukama hwakareba hwebhizinesi nevatengi vepasirese.
Isu takave nemamiriro akanaka kwazvo mukushanda nevatengi vanobva kunyika dzakasiyana munzvimbo dzakasiyana siyana makore mazhinji uye tichipa basa rakawedzerwa. Tinotenda kubatana kwedu kwakanakisa kunounza mibairo inoshamisa kune isu vaviri.
Isu takaisa mari uye takagovana mafekitori e6 muChina. Vazhinji vatengi vanogamuchirwa kuti vatibate. Isu tinosimbisa hukama hwakanaka nevatengi kuburikidza nebasa redu rakanaka uye nehunyanzvi maitiro.
Yedu Huru Zvigadzirwa Range:
1.Monoblock Mvura uye Beverage Kuzadza Capping Kunyora uye Kurongedza yakazara tambo
2.Linear Liquid Kuzadza Mutsetse wemaindasitiri akasiyana
3.Mhando dzese dzeKunyorera muchina
4.Packing muchina (yemvura, hupfu, granule, namatidza etc.)
5.Bottle ichivhuvhuta muchina
6.Water mishonga yekurapa
7.Beverage pre-kurapwa system